စိုးရိမ်လို့ ပြောပါသည် | MoeMaKa Burmese News & Media
မေ ၁၅၊ ၂၀၀၂
• ရွှေဂက်စ်နဲ့ အစရှိသဖြင့် မြန်မာ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းများ (Safety & Health)
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောက် လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဟောပြောပွဲတခု ကို မေလ ၄ ရက်နေ့၌ကျင်းပ မည်ဟု ဖေ့စ်ဘွတ်တွင်တွေ့လိုက်ရသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် ထိုပွဲကို တက်ရောက် နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါ သည်။ ကျွန်မတို့မသိသေးသေ အကြောင်းအရာသစ်ဖြစ်သည့်ပြင် ဟောပြောသွားသည်များမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။
ဟောပြောသွားသည်များထဲမှ ကျွန်မစိတ်အ၀င်စားဆုံးမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘိုပါးမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကြောင့် လူပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီးမှုနှင့် တဆက်တည်းပြခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှ ကူမင်မြို့သို့သွယ်တန်းသည့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါတို့မှာ သူပြခဲ့သော ထိုစီမံကိန်းမှဓါတ်ပုံအချို့ဖြစ်ပါသည်။
• အသက်ဘေး သဘာဝဘေး စိုးရိမ်ဖွယ် ပိုက်သွယ်တန်းမှုများ
ဟောပြောသူက ၎င်းသည် ပိုက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် ဆယ့်လေးနှစ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်၍ ဤဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ခါမျှဖြင့် ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်း ထားမှုမှာ အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်း၊ ပိုက်လိုင်းဟူသည် မသွယ်တန်းမီကပင် ပိုက်အထိုင်များကို သေချာကျနစွာလုပ် ထားရကြောင်း၊ ပိုက်အထိုင်မကောင်းပါက ပိုက်အဆက်များအပေါ် အားသက်ရောက်မှုများရှိကာ နှစ်ကြာလာလျှင် ပိုက်အဆက်များ အက် ခြင်း၊ ကွဲခြင်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ထိုအခါ ထိုနေရာများမှ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်နေသည့် အနီးတ၀ိုက်တွင် မီးပွားတခုခုကျခဲ့ပါက ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းပေါက်ကွဲကာ အနီးအနားမှ မြန်မာပြည်သူအများအပြား သေကြေပျက်စီးနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိ နိုင်ပါကြောင်း၊ ပိုက်လိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ရာ မြို့၊ ရွာ၊ လမ်းများကို ဖြတ်သန်းသွားမည်မှာ မလွဲ။ ထို့ကြောင့် ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းသွားရာတလျှောက်မှ မြို့၊ ရွာနေပြည်သူများသည် မိုင်းဗုံးဘေးတွင် နေနေကြရသည်နှင့်တူကြောင်း။
ထို့ပြင် ပိုက်လိုင်းအဆက်များကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးသည့်စနစ်ရှိပါသလား၊ မည်သူတို့သည် ပိုက်လိုင်းအရည်အသွေးကို တာဝန်ယူ စစ်ဆေးပါသနည်း။ ဤပိုက်လိုင်း လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မည်ကဲ့သို့ အာမခံထားပါသနည်း။ ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းသွားသည့် လမ်းတစ်လျှောက် ခုတ်ထွင်ရှင်းလိုက်ရသော သစ်ပင်တောတောင်များအတွက် မည်ကဲ့သို့စီမံထားပါသနည်း။ ဤပိုက်လိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ရှိနေ သည့်အတွက် ပိုက်လိုင်းစီမံချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား မည်မျှခန့်ထားပါသနည်း။ ထိုမြန်မာနိုင်ငံသားများထဲတွင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ကျူစီ (အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအရာရှိ)၊ ပိုက်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာတို့ ပါပါသလားဟု မေးခွန်းထုတ်သွားပါသည်။
ဟောပြောပွဲအပြီး ပြန်လှန်ဆွေးနွေးခန်းတွင် အရာရှိတဦးထလာကာ ၎င်းတို့အနေနှင့် ထိုဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက် မည်ကဲ့သို့သောအရည် အသွေး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ ကုန်းပေါ်ပိုက်လိုင်းတွင်သာမက ကမ်းလွန်ပိုက်လိုင်းများကိုပါ စနစ်တကျ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းပါသည်။
ထိုအခါ လာရောက်နားထောင်သူများထဲမှ အင်ဂျင်နီယာဟုယူဆရသူတစ်ဦးက သူ့အနေနှင့် ထိုဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်း သည့်နေရာသို့ သွားကာ ပိုက်လိုင်းဆင်နေသူများနှင့် စကားစနေပြောဖူးပါကြောင်း၊ သူက ပိုက်လိုင်းအား ဂဟေဆက်ရာတွင် မည်သည့်စံနှုန်းကို ကိုင်ကာ ဆက်ပါသနည်းဟုမေးသောအခါ ပြန်မဖြေနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် Welding Procedure Specification ကို သိပါသလား၊ သည်အဆက်ကို ဂ ဟေဆော်သည့် WPS ကိုသိပါရစေဟု မေးသောအခါတွင်လည်း WPS ဟူသည် ဘာဆိုသည်ကိုပင် နားမလည်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုပိုက် လိုင်းကိုဆင်နေသူများမှာ တတ်သိနားလည်သူ၊ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကို ယုံကြည်ရန် အလွန်ခက်ပါကြောင်းများဖြင့် ပြန်လည် ဖြေကြားသွားပါသည်။
• လုပ်ငန်းခွင်ဗဟုသုတနှင့် လူထု၏ ဗဟုသုတကွယ်လပ်ကြီး
ကျွန်မသည် ရေနံပိုက်လိုင်းတွင် ကျူစီအဖြစ် နှစ်အတန်ကြာလုပ်ခဲ့ဖူးသဖြင့် ပိုက်လိုင်းများအကြောင်း အင်ဂျင်နီယာများလောက် မတတ် ကျွမ်းသော်လည်း ပိုက်လိုင်းတစ်ခု၏အရည်အသွေးကို မည်ကဲ့သို့စစ်ဆေးရသည်၊ မည်သည့်စံနှုန်းများအရ မည်သည်တုိ့ပြုလုပ်ရန် လိုသည် ဆိုသည်များကိုမူ သေသေချာချာသိပါသည်။
ပိုက်လိုင်းတစ်ခု ဆင်တော့မည်ဆိုလျှင် ထိုပိုက်လိုင်းပြေးမည့်ပုံများ (Schematic Diagram, Piping and Instrument Diagram, Flow Diagram, General Arrangement Drawing, Isometric Drawing အစရှိသည်)။ ပိုက်လိုင်းတွင်တပ်ဆင်ရမည့်ကိရိယာများနှင့်တကွ ပိုက်လိုင်း၏ အတွင်းအပြင်ဖိအား၊ အပူချိန်အစရှိသည်တို့ကို ဦးစွာတင်ပြရပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုပိုက်လိုင်းအကြောင်း အပြည့်အစုံဖော်ပြ ထားသည့် ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်နည်းလက်စွဲ (Piping Procedure Specification) ကိုလည်း ရေးဆွဲတင်ပြရပါသည်။ ထိုလက်စွဲစာအုပ်တွင် ပိုက်လိုင်း၌တပ်ဆင်မည့် ပိုက်၊ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း၊ ဗား၊ ပိုက်အထိုင်၊ ကိရိယာများ၏အရည်အသွေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြထားပါသည်။ ပိုက် ကိုမည်ကဲ့သို့ ဆင်ရမည်။ မည်ကဲ့သို့သောပိုက်အထိုင်များဆင်ရမည်။ မည်သည့်ဆေးကို မည်ကဲ့သို့သုတ်ရမည်။ ပိုက်လိုင်းကို မည်ကဲ့သို့ စမ်းသပ်ရမည်။ ပိုက်နှင့်ပိုက်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုသော်လည်းကောင်း ဂဟေဆော်လျှင် မည်သည့်စံနှုန်း များနှင့် ဆော်ရမည်။ ဂဟေဆော်သူသည် မည်သည့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည် အစရှိသဖြင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြထား၏။
ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြေငလျင်ဒဏ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပိုက်အတွင်းရှိ ဖိအားကြောင့်သော်လည်းကောင်း ပိုက်လိုင်းသည် အလျားလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ဘေးတိုက်သော်လည်းကောင်း ရွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုက်လိုင်း ရွေ့လျားမှုကိုထိန်း ရန် ပိုက်အထိုင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်မျှကွာရမည်၊ မည်သည့်နေရာများတွင် ပိုက်အထိန်း (pipe guides) များထည့်ရမည်၊ မည်သည့်နေရာများ တွင် ပိုက်လိုင်းအချုပ် (anchor points) များထည့်ရမည် စသည်ဖြင့် သေသေချာချာ ဒီဇိုင်းဆွဲရပါသည်။ ဤသို့ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းကို Stress Analysis ဟုခေါ်ပြီး ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်အားဖြင့် Caesar II Program ကို သုံးကြပါသည်။
ပိုက်များမချမီကတည်းက ပိုက်အထိုင်များကို သေသေချာချာဆင်ထားရပါသည်။ ပိုက်များကို ဂဟေဆော်ပြီးနောက် ဂဟေဆက်များတွင် အားမသက်ရောက်စေရန် ပိုက်လိုင်းအား လှုပ်ရှားမှုနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်ထားရပါသည်။ ထိုဓါတ်ပုံများအရ ပိုက်လိုင်းမှာ ဂဟေဆက်ပြီး သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ မျက်မြင်အရပြောရသော် ထိုပိုက်လိုင်းကို မြေသားအထိုင် (bedding) ပေါ်တင်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုက်အထိုင် ထပ်မံမလုပ်တော့ဘဲ ထိုမြေသားအထိုင်များသည်ပင်လျှင် အသေဖြစ်ဖို့များပါသည်။ ဤတွင် ထိုပိုက်လိုင်းအထိုင်များမှာ သေသေချာချာ ဒီဇိုင်းဆွဲ၊ တွက်ချက်ထားတာလားဆိုတာ သံသယရှိစရာဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွင် ပိုက်လိုင်းအထိုင် အလွန်အရေး ကြီးပါသည်။ မဟုတ်ပါက ပိုက်အဆက်များအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါသည်။ ထို့အတူ ပိုက်လိုင်းအနီးနေထိုင်သူများအတွက်လည်း အန္တရာယ်များပါသည်။
• မိမိနိုင်ငံအတွက်လား … သူတပါးနိုင်ငံအတွက်လား
ဟောပြောသူ နောက်တချက်ထောက်ပြသွားသည်မှာ ပိုက်လိုင်းအတွက် ခန့်ထားသည့်ဝန်ထမ်းအင်အား ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပိုက်လိုင်းတွင် သိရသလောက် မြန်မာလူမျိုးကို မခန့်သလောက်ဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေသူအများစုမှာ နိုင်ငံခြားသားများချည်းဖြစ်သည်။ အမှန်ဆိုရလျှင် မြန် မာနိုင်ငံအတွင်း၌လုပ်နေသည့်စီမံကိန်းဖြစ်သဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများကို ဦးစားပေးခန့်ထားရမည်။ နိုင်ငံခြားသားများခန့်လိုလျှင် မြန်မာလူမျိုး မည်မျှရှိမှ နိုင်ငံခြားသားမည်မျှခန့်ထားနိုင်သည်ကို သတ်မှတ်ထားသင့်ပါသည်။ စင်ကာပူတွင် နိုင်ငံခြားသားများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်းကို Foreing Workers Employment Act ဟူသည့်ဥပဒေဖြင့် ပြဌာန်းထိန်းချုပ်ထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် သူက မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ် သမားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဥပဒေများကိုလေ့လာကြည့်ရာ ထိုဥပဒေမျိုးမတွေ့ဖူးသေးပါ။ နိုင်ငံခြားသားများအား အလုပ်ခန့်ထားရေးအ တွက် ထိုဥပဒေမျိုးကို အလျင်အမြန်ရေးဆွဲပြဌာန်းသင့်ပေသည်ဟုလည်း ထောက်ပြသွားပါသည်။
သူပြောသည်မှာ မှန်ပါသည်။ မကြာမီ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအများအပြား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မည်ဖြစ်ရာ မည်ကဲ့ သို့သောသူများအား မည်သည့်အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမည်နည်း။ ထိုသူများ၏အရည်အချင်းနှင့် ဘာသာစကား ကန့်သတ် ချက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်စဉ်လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စသည်တို့ကို ယခုကတည်းက ဥပဒေရေး ဆွဲထားသင့်ပါသည်။ ဥပဒေရှိပြီးဖြစ်လျှင်လည်း အများပြည်သူသိအောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပေးထုတ်ပြန်သင့်ပါသည်။ သို့မှ လိုအပ် သည်များကို ထောက်ပြပြင်ဆင်နိုင်ပါမည်။ ထို့ပြင် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေကို တိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လည်း အ ရေးကြီးပါသည်။
• ပြည်သူတွေ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် စတေးခံကြရဦးမှာလား
ဤတွင် သာမန်ပြည်သူတဦးအနေနှင့် ကျွန်မတွေးမိသည်ကို တင်ပြပါမည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းမျိုးမဆို အများပြည်သူ၏ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ပထမဦးစားပေးအနေနှင့် စဉ်းစားသင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမည့်လုပ်ငန်းပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ပြည်သူများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက တာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် အလေးအနက်ထားဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်။ လုပ်မည်ဆိုလျှင်ပင် စိတ်ချရသည့်အခြေအနေ တခုရောက်အောင် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များနှင့်တိုင်ပင်ကာ အစီအမံများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုပါသည်။
ထိုပိုက်လိုင်းသာမက မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို လုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မည်ဆိုသည်နှင့် ထိုလုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းများ ကို ဦးစွာတင်ပြရန်လိုပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းတွင်သုံးမည့်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကို အာမခံထားသောလက်မှတ်များ၊ ထိုလုပ်ငန်းကို အ ကောင်အထည်ဖော်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ထိုလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်သား၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ အရာရှိများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များ၊ လုပ်သားများ၏ကျွမ်းကျင်မှုကို ထောက်ခံထားသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အစီအမံများ စ သည်ဖြင့် ပြည့်စုံစွာတင်ပြပြီး အစိုးရ၊ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်ကကျေနပ်မှ လုပ်ငန်းစတင်ရပါမည်။
ကျွန်မတို့ ပြည်သူပြည်သားများမှာ ပညာရှင်များမဟုတ်သည့်အတွက် ဤအကြောင်းများကို ဂဃနဏသိရန် မလွယ်ပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လျှင် ခါးစည်းခံကြရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤပိုက်လိုင်းသည် မည်သည့်ပိုက်လိုင်းဖြစ်သည်။ မည်ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များ ရှိသည်ကို မသိနိုင်ပါသဖြင့် ပိုက်လိုင်းအနီးအနားတွင် ဆေးလိပ်သောက်မိမည်။ မီးဖိုချင်လျှင်ပင် ဖိုမိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍သာ ပိုက် လိုင်းမှ ဓာတ်ငွေ့များယိုစိမ့်နေပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အန္တရာယ်မှာ မတွေးဝံ့စရာပါ။
ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် သန်း ၆၀ မျှသောနိုင်ငံသားများ မှီတင်းနေထိုင်ကြပါသည်။ နိုင်ငံသာယာဝပြောရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး တို့အတွက် နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံအေးချမ်းသာယာဝပြောလျှင် ပြည်သူအများလည်း သာယာအေးချမ်းစွာ နေနိုင်ကြမည်။ ပြည်သူများ၏ ပြဿနာသည် နိုင်ငံ့ပြဿနာဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံ့အရေးသည်လည်း ပြည်သူတို့အရေး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း အမြင်မတော်တာများရှိပါက ပြည်သူများအနေနှင့် ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပြ၊ ပြင်ဆင်ကြဖို့ တာဝန်ရှိပါသည်။ (See Something, Say Something) ဤသို့ထောက်ပြခြင်းမှာ အပျက်ဘက်၊ အဆိုးဘက်မှ မကောင်းမြင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မဖြစ်သင့်သည်များ မဖြစ်အောင် အချိန်မီ အရေး ယူ၊ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် သတိပေးခြင်းမျှဖြစ်သည်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် အမြင်ရှင်းရန်လိုပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် တာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် ဤကိစ္စများအပေါ် ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် အများပြည်သူတို့ကိုယ်စား မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ရပါသည်ရှင့်။
13 Responses to စိုးရိမ်လို့ ပြောပါသည်
ုkyaw zar on May 15, 2012 at 11:12 pm
တင်ပြဆွေးနွေးမူကိုလေးစားထောက်ခံပါသည်။တာဝန်ရှိသူအားလုံးမိမိ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အဆိုးဆုံးကိုတွက်ဆပြီးအကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ညှိနိုင်းလုပ်ဆောင်အပ်သည်။မြန်မာသမိုင်းသစ်ဝန်ထမ်း
grace on May 16, 2012 at 2:09 am
အလွန်ကောင်းမွန်သော အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည် ။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် ဆောင်ရွက်ထားမှုများ ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် လက်ရှိ အစိုးရအနေဖြင့်
ပညာရှင်များအပေါ် နေရာပေး အလေးထားကာ ( တပ်မတော်မှလေ့ကျင့်ပေးထားသော လူများမှာ လက်ရှိတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောနေရာများတွင် ရောက်ရှိနေပါသည် ။ နေရာများရယူထားပြီး ညှိုနှိုင်းခြင်းအတတ်ပညာ(ငွေရရှိရေးမိမိအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေး။စစ်ရေးစွမ်းဆောင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်
ထားသူများ ) သာဖြစ်ပါသည် ။ တသွေးတသံအောက်တွင် နေသာကျသူများဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ယခုဖော်ပြထားသော ပညာရပ်ပိုင်းများအတွက် စဉ်းစားထားခြင်းမရှိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းများအား အဆုံးသတ်ရန်အတွက် စာရေးသူ၏ အကြံပြုချက်များကို အထူးသဖြင့် )တရုတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံချက်များအားစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း ။ ပြည်ပ ပညာ၇ှင်များအားဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ယခုအခါ ပြည်ပ ရောက်ပညာရှင်များမှာ တတ်စွမ်းသည့်ဘက်မှ ကူညီပေးလိုသူများရှိသဖြင့် နိုင်ငံတော်သမတရုံး ၀က်ဆိုက်ဒ် မှ တရားဝင် (ရေတို )အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုသည့် စစ်ဆေးရေးစီမံချက်များအတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် ( ပညာရပ်အပိုင်းသာ ) ကိုသတ်မှတ်ပြီး အချိန်ကာလ (၃-၆)လပိုင်းခြားကာ ဖိတ်ခေါ်သင့်ပါသည်။ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကို ဘာကြောင့် မပေးသေးတာလဲ ၊ ပေးလိုက်ရင် အစိုး၇အပေါ်ပိုယုံကြည် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
မောင်ပျာလောင် on May 16, 2012 at 5:51 am
” အမှန်ဆိုရလျှင် မြန် မာနိုင်ငံအတွင်း၌လုပ်နေသည့်စီမံကိန်းဖြစ်သဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများကို ဦးစားပေးခန့်ထားရမည်။” ဆိုသည့်အချက်ကို အလွန်ကျေနပ်ပါသည်၊ သို့ သော် အထက်အမိန့် ကိုသာ နာခံတပ်သော၊ စဉ်းစားဉာဏ်မရှိသော၊ လေ့ကျင့်ပြီးသားမရှိသော စစ်ဗိုလ်ပြုတ်များကိုသာနေရာပေးထား ပါက အန္တရယ်တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မှာလည်း။
ပြည်သူသာလျှင် မိအေးနှစ်ခါနာ မဖြစ်ဖူးလား ? ? ၊
စစ်ဗိုလ် တမတ်သားပါလီမန်ကြီးကိုသာကြည့်ပါလား။ စစ်ဗိုလ်တွေ တကယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ သစ္စာရှိတယ် ပြည်သူသာလျှင် အမိအဖလို့ သဘောထားလျှင် တပ်ကထွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါ။
ပြည်သူကတကယ်ချစ်ရင် တမတ်သားမဟုတ်ပါ၊ ရာခိုင်နှုံး ၁၀၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ယူပါ။
ဆောင်းပါးရှင် ကိုလေးစားပါတယ်၊ တပ်သိပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကို သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများ အရေးပေးစဉ်းစားပါ။ မလုပ် မပြုတ် လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငြှိမ့် ဘ၀ကိုရှက်တပ်ပါ လူကြီးမင်းများခင်ဗျား – – –
ုkyawhtay on May 16, 2012 at 1:06 pm
အင်မတန်ကောင်းသော ဆောင်းပါးနှင့် မှတ်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ရေးသားသူအားလုံး၏ စေတနာကို များစွာလေးစားပါသည်။ သမ္မတ ကြီးအနေနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ သမ္မတကြီးအား အကြံပေးနေ ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနှင့်လည်းကောင်း လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများကို ပြည်တွင်းရှိ တတ်ကျွမ်းသူအင်ဂျင်နီယာများအားဆောင်ရွက်စေရန် သော်လည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန် တတ်သိ ကျွမ်း ကျင်သူ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားများကို ဖိတ်ခေါ်၍ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အကူအညီ ပေးရန်ကမ်းလှမ်းထားကြသော ပြည်ပနိုင်ငံ အစိုးရများ၏ အကူအညီကို ရယူလျက်စစ်ဆေးစေ ရန်သော်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းများကို မြေဖို့ ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်မီ ဆောင်ရွက်စေသင့်ပါသည်။
Bocho on May 16, 2012 at 2:30 pm
ဒီဆောင်းပါးလေးကို အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းသွားရာ အနီးအနားရှိ ဒေသခံများ ဖတ်နိုင်အောင်
လက်ကမ်းစာစောင်သဘော ဖြန့်ဝေနိုင်လျှင် ကောင်းမည် ထင်ပါသည်။
ဒါမှသာ သူတို့ လက်ရှိအခြေအနေကို သဘောပေါက်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ စဉ်းစားမိလာကြမည်ထင်ပါသည်။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ ဆိုင်းပုဒ် ထောင်ထားခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်သော သတိပေးချက် ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ohnmar on May 16, 2012 at 3:29 pm
ဆောင်းပါး၇ှင်ကိုလေးစားပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ကျွန်မပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်သော်
လည်း ဒီ ပြဿနာကိုတွေးမြင်သိရှိနေပါသည်။သို့သော်မည်ကဲ့သို့တင်ပြရမည်နားမလည်ပါ။ယခုကဲ့သို့
zakawa on May 16, 2012 at 7:21 pm
mgoogyaw on May 16, 2012 at 8:06 pm
All what in this article and the comments are 100% true. I have totally appreciate,everything,that mentioned in this column.
brandon on May 17, 2012 at 5:51 am
That’s right. Safety first
*U AYE on May 17, 2012 at 8:20 am
THANKS FOR YOUR ARTICAL. WE HAD TRAINING CENTRE OF MINISTRY OF LABOUT IN KANBE’. BUT NOBODY INTEREST AND SUPPORT ON IT. IT IS ESENTIAL AND CRITICAL IN SINGAPORE, MALAYSIA AND THAILAND. VERY STRICTLY CONTROL IN DEVELOPING COUNTRIES. THEY KNOW THE VALUE OF HUMAN LIFE. VALUE OF MYANMAR PEOPLE’S LIFE IS IGNORED BY GOVERNMENT.
FORIGN WORKER’S RATIO IS LIMITED IN ALL COUNTRIES IN THE WORLD. WHY IT’S NEGLETED IN OUR COUNTRY.
Nay Win on May 17, 2012 at 8:57 am
if you don’t know, please do not write.
piping spec and pipeline spec is different.
they are also professional. they know what they are doing.
what you saying here is only correct for piping(process piping), not for pipe line.
ကိုလတ် on May 17, 2012 at 12:43 pm
ဲမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ က ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုး၊နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးကိုဘဲ ကြည့်ပေးပြီးလိုအပ်သလိုအရေးယူပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်
Witmone on May 17, 2012 at 6:39 pm
I can not use Burmese font now and use English…
Our president U Thein Sein visited – reformed Vietnam and Cambodia. Yes, many EU, USA and China company already settled there, but they have big issue on Chinese company work permit problem. Chinese company use china men’s manpower at all levels. Vietnam and Cambodia reform is likeadictator style. A lot of corruption (Oop, presently Burma corruption is worse).
My suggestion is to ask help to Chez and Slovet – two countries. Because within 15 years, IMF decleared them as developed country.